Edson -IRosari yemihla ngemihla-Ukubalwa ukuya eBukumkanini
Ukumkanikazi weRosary kunye noxolo ukuze	Edson Glauber ngo-Okthobha 11, 2020:
Luxolo, bantwana bam abathandekayo, uxolo! Ndinibizela kuThixo, bantwana bam. Ndikukhokela kwindlela eya eZulwini. Ndize kuthuthuzela imiphefumlo yenu neentliziyo zenu malunga nayo yonke imithwalo yenu, ukudinwa kunye nembandezelo. Ndize kubuyisa amandla akho, ndikunika uthando loNyana wam, obubomi namandla omntu ngamnye kuni. Khathalela iintsapho zakho-ukuthandaza, ukuzila ukutya nokuzibeka ezandleni zikaYesu, yonke imihla. NgoYesu ninazo zonke iintsikelelo; ngaphandle kukaYesu awunakwenza nto. Amaxesha abuhlungu kwaye anzima okuba, kokukhona kuya kufuneka ukonyuse ukuzithemba kwakho kwiNtliziyo yoNyana wam oyiNgcwele. Uyakuthanda kwaye usecaleni lakho ukuze akusikelele kwaye akuphilise kuzo zonke izifo. Isibindi, bantwana bam; yiba nokholo kwaye uya kuboyisa bonke ububi. Ndiyakusikelela: egameni loYise, loNyana, loMoya oyiNgcwele. Amen!
Oktobha 10, 2020:
Luxolo, bantwana bam abathandekayo, uxolo! Bantwana bam, into ebubuxoki iyamkelwa ngabaninzi kwaye eyinyani iyaliwa kwaye ibekelwe bucala. Yilwa nabo bonke ububi ngokuba ngamangqina enyaniso. Musa ukuvumela ubuxoki boyise inyaniso. Musa ukuvumela ububi boyise kwaye balawule kwiCawa eNgcwele nakwiintsapho zakho ngenxa yokunqongophala komthandazo, idini kunye nezohlwayo. Thandaza iRosari eNgcwele yonke imihla ukugxotha bonke ububi obukujikelezileyo kwaye ubufuthanisele kula maxesha anzima nasebumnyameni xa iintshaba zikaThixo zisebenza ngaphakathi kweCawa yoNyana wam, zifuna ukumenza inxuwa, emhadini weedemon, amasela nemiphefumlo engenaye uThixo. Ngaphandle komthandazo awukwazi ukoyisa ububi obukusongelayo, kwaye awunakuba nawo amandla okulwa nabo bakuhlaselayo. Thandaza kwaye ukhawuleze. Thandaza kwaye ukhawuleze. Thandaza kwaye ukhawuleze, kwaye bonke ububi buya koyiswa kwaye butshabalale; Ngale ndlela imiphefumlo yenu iya kukhululwa kwimpembelelo kasathana kwaye iintsapho zenu ziya kuphiliswa zibuyiswe luthando nobabalo lukaThixo. Ndiyanisikelela nonke: egameni loYise, loNyana, loMoya oyiNgcwele. Amen!
← UGisella-UMtyholi ukhululiwe
Edson -Umthandazo kuSt Michael →